[ , ] Algorithmic mampifangaro dia ny olana amin'ny Google Trends gripa. Vakio ny taratasy avy Lazer et al. (2014) , ary hanoratra fohy, mazava mailaka ho injeniera ao amin'ny Google manazava ny olana sy ny fanatitra hevitra ny fomba hamaha ny olana.
[ ] Bollen, Mao, and Zeng (2011) milaza fa avy amin'ny Twitter angona azo ampiasaina mba mialoha ny tahiry tsena. Izany fitadiavana nitarika ho amin'ny fananganana fefy bola-Derwent Renivohitra Markets-hampiasa vola ao amin'ny tsenam-bola mifototra amin'ny angon-drakitra nangonina avy amin'ny Twitter (Jordan 2010) . Inona no porofo ve ianao te-hahita alohan'ny fanaovana ny vola amin'izany tahirim-bola?
[ ] Raha fahasalamam-bahoaka ny sasany mpiaro ny havandra e-sigara ho mahomby fanampiana ho fampitsaharana ny fifohana sigara, ny hafa mampitandrina momba ny mety ho loza, toy ny avo-ambaratonga ny nikôtinina. Aoka hatao hoe misy mpikaroka manapa-kevitra ny hianatra ny hevi-bahoaka amin'ny e-sigara amin'ny alalan'ny fanangonana ny e-sigara-mifandray lahatsoratra Twitter sy ny fitarihana fihetseham-po famakafakana.
Inona no azo atao telo mifanavakavaka fa ianao no tena manahy amin'ny fianarana ity?
Clark et al. (2016) nihazakazaka toy izany ny fianarana. Voalohany, dia nanangona 850,000 bitsika izay nampiasa e-sigara-mifandray teny fanalahidy avy Janoary 2012 amin'ny alalan'ny Desambra 2014. Amin'ny maso akaiky kokoa, dia tonga saina fa maro ny bitsika ireo dia mandeha ho azy (izany hoe, tsy vokatry ny olombelona) ary maro ireo bitsika mandeha ho azy ireo indrindra dokam-barotra. Lasa olombelona izy ireo Detection Algorithm mba hanavaka automated bitsika avy amin'ny organika bitsika. Mampiasa izany Human mamantatra Algorithm dia nahita fa ny 80% ny bitsika dia mandeha ho azy. Ve izany fitadiavana hanova ny valim-ampahany (a)?
Rehefa nampitaha ny fihetseham-po amin'ny voarindra sy automated bitsika dia nahita fa ny mandeha ho azy bitsika dia tsara kokoa noho ny organika bitsika (6.17 oharina 5.84). Ve izany fitadiavana hanova ny valin-(b)?
[ ] Tamin'ny Novambra 2009, Twitter nanova ny fanontaniana ao amin'ny bitsika efajoro amin'ny "Inona no ataonao?" Ho "Inona no mitranga?" (Https://blog.twitter.com/2009/whats-happening).
Ahoana araka ny eritreritrao ny fanovana ny manosika hisy vokany eo izay bitsika sy / na ny zavatra misioka?
Anarana iray ho an'ny tetikasa fikarohana izay mety kokoa ny avy hatrany "Inona no ataonao?" Hazavao ny antony.
Anarana iray ho an'ny tetikasa fikarohana izay mety kokoa ny haingana "Inona no mitranga?" Hazavao ny antony.
[ ] Kwak et al. (2010) nandinika 41.7 tapitrisa mpampiasa mombamomba, 1.47 lavitrisa ny fifandraisana ara-tsosialy, 4262 lohahevitra, ary ny 106 tapitrisa bitsika eo Jona 6 sy Jona 31, 2009. Miorina amin'ny fanadihadiana ity dia nanatsoaka hevitra fa ny Twitter manompo bebe kokoa ho toy ny fitaovana vaovao ny fizaram-baovao noho ny Tambazotram-pifandraisana.
Nandinika Kwak de Al ny fitadiavana olona, ​​inona no karazana fikarohana no hataonao amin'ny Twitter angona? Inona no karazana fikarohana no tsy manao amin'ny Twitter angona? Nahoana?
Tamin'ny 2010, nanampy Twitter iray izay hanaraka asa fanompoana mifanaraka nanao soso-kevitra ny mpampiasa. Tolo-kevitra telo no aseho amin'ny fotoana eo amin'ny lehibe pejy. Tolo-kevitra matetika amin'ny iray voasariky ny "namana-ny-namana", ary koa ny fifandraisana fiaraha naseho ao amin'ny fanolorana. Ireo mpampiasa dia afaka hamelombelona ny mahita vaovao napetraka ny tolo-kevitra na hitsidika ny pejy miaraka amin'ny lisitry ny tolo-kevitra intsony. Mihevitra ve ianao fa ity endri-javatra vaovao no hanova ny valim-ampahany a)? Nahoana na nahoana no tsy?
Su, Sharma, and Goel (2016) fizahana ny vokatry ny izay mba hanaraka asa fanompoana sy hita fa raha mpampiasa manerana ny lazany karazany nandray soa avy tamin'ny fanolorana, malaza indrindra mpampiasa soa betsaka kokoa noho ny eo ho eo. Ve izany manova ny fitadiavana valiny ho anjara b)? Nahoana na nahoana no tsy?
[ ] "Retweets" dia matetika ampiasaina mba handrefesana fitaoman'ny ka namelatra ny hery mitarika ao amin'ny Twitter. Voalohany, ireo mpampiasa maintsy handika ary apetaho ny bitsika ireo tia, Tag mpanoratra tany am-boalohany ny / ny tahony, ary tanana type "RT" eo anoloan'ny sioka mba milaza fa misy Retweet. Avy eo, tamin'ny 2009 Twitter nanampy ny "bitsika" bokotra. Tamin'ny Jona 2016, Twitter nahatonga ny mpampiasa ny bitsika ny bitsika (https://twitter.com/twitter/status/742749353689780224). Mihevitra ve ianao fa fiovana ireo dia tokony vokany ny fomba mampiasa "retweets" ao amin'ny fikarohana? Nahoana na nahoana no tsy?
[ , , ] Michel et al. (2011) nanorina ny Corpus vao misondrotra avy amin'ny Google ny ezaka mba digitize boky. Nampiasa ny voalohany dikan-ny Corpus, izay nivoaka tamin'ny taona 2009, ary hita maherin'ny 5 tapitrisa digitized boky, ny mpanoratra nandinika teny fampiasana matetika ny fanadihadiana ara-pitenenana sy ara-kolotsaina fironana fiovana. Tsy ela dia ny Google Books Corpus lasa malaza ho an'ny angon-drakitra loharanon mpikaroka, ary ny 2 dikan-ny banky angona Navoaka tamin'ny 2012.
Na izany aza, Pechenick, Danforth, and Dodds (2015) dia nampitandrina fa ho tanteraka ny mpikaroka mila toetra ny santionany fizotry ny Corpus alohan'ny mampiasa izany ho nandinika ny sakany fanatsoahan-kevitra. Ny tena olana dia ny Corpus dia tranomboky-tahaka, misy iray amin'ireo boky tsirairay. Ho vokany, dia olona iray, mazoto mpanoratra dia afaka miharihary ampidiro andian-teny vaovao ho any amin'ny Google Books Diksionera. Ankoatra izany, anisan'ny soratra Siantifika ny miha-substantive ampahany amin 'ny Corpus nandritra ny taona 1900. Ankoatra izany, amin'ny alalan'ny fampitahana roa dikan 'ny teny anglisy Fiction datasets, Pechenick et al. hita porofo fa tsy ampy ny sivana nampiasaina tamin'ny famokarana voalohany dikan. Ny tahirin-kevitra rehetra ilaina ho an'ny asa dia hita ato: http://storage.googleapis.com/books/ngrams/books/datasetsv2.html
Ao Michel et al. Taratasy tany am-boalohany (2011) , dia nampiasa ny 1 dikan 'ny teny anglisy angona napetraka, Nitetika ny matetika ny fampiasana ny taona "1880", "1912" sy ny "1973", ka nanatsoaka hevitra fa "isika manadino ny lasa haingana amin'ny isan-taona "(Fig. 3a, Michel et al.). Maka tahaka ny tetika ihany fampiasana 1) 1 dikan-ny Corpus, anglisy dataset (mitovy amin'ny Fig. 3a, Michel et al.)
Ary maka tahaka ny tetika toy izany koa ny 1 dika, Anglisy Fiction dataset.
Ary maka tahaka ny tetika toy izany koa ny 2 dikan-ny Corpus, Anglisy dataset.
Farany, maka tahaka ny tetika toy izany koa ny 2 dika, Anglisy Fiction dataset.
Lazalazao ny fahasamihafana sy ny fitoviana eo ireo sombin efatra. Ve ianao miombon-kevitra amin'ny Michel et al. Ny hevitry ny teny tany am-boalohany nahita fironana? (Soso-kevitra: c) sy d) Tokony ho toy izany koa tahaka Figure 16 in Pechenick et al.)
Fa efa replicated io fitadiavana olona iray mampiasa Google Books hafa corpora, mifidy fiteny iray hafa fiovana na trangan-javatra ara-kolontsaina aseho ao Michel et al. Taratasy tany am-boalohany. Ekenao ve ny heviny ao amin'ny fanazavana ny famerana aseho amin'ny Pechenick et al.? Mba hahatonga ny fandresen-dahatra matanjaka, miezaka maka tahaka ny fampiasana sary izany dikan-samihafa ny tahirin-kevitra teo ho ambony.
[ , , , ] Penney (2016) mandalina raha miely patrana dokambarotra momba ny NSA / Prism fanaraha-maso (izany hoe, ny fanambarana Snowden) volana Jona 2013 dia mifandray amin'ny maranitra sy tampoka fihenan'ny fifamoivoizana ny Wikipedia lahatsoratra ao amin'ny lohahevitra izay manangana olana fiainana manokana. Raha izany no izy, izany fiovana eo amin'ny fitondran-tena mety ho mifanaraka amin'ny mifofofofo sy vokany vokatry ny fanarahamaso faobe. Ny fomba ny Penney (2016) dia indraindray niantso ny tapaka ny andian-dahatsoratra famolavolana ary mifandray amin'ny manakaiky ao amin'ny toko momba ny approximating fanandramana avy amin'ny observational tahirin-kevitra (sampana 2.4.3).
Hisafidy ny lohahevitra teny fanalahidy, Penney niresaka momba ny lisitra nampiasain'i US Department of Lasa nisy Security noho ny Tracking sy ny fanaraha-maso ny media sosialy. Ny DHS lisitra categorizes sasany fikarohana teny ho isan-karazany ny lohahevitra, izany hoe "Health Concern," "Fotodrafitrasa Security," sy ny "fampihorohoroana." Fa ny fianarana vondrona, Penney nampiasa ny efa-polo-valo teny fanalahidy mifandraika amin'ny "fampihorohoroana" (jereo ny Table 8 Fanazavana fanampiny). Avy eo izy dia aggregated Wikipedia article jerena mandritry ny fitsidihana amin'ny isam-bolana fototry ny mifanitsy valo amby efa-polo Wikipedia lahatsoratra nandritra ny roa amby telo-polo volana fe-potoana, hatrany am-piandohana ny Janoary 2012 ho ny faran'ny volana Aogositra 2014. Manamafy ny fandresen-dahatra, maro ihany koa izy namorona fampitahana vondrona amin'ny alalan'ny lahatsoratra Tracking fomba fijery amin'ny lohahevitra hafa.
Ankehitriny, ianao dia mba maka tahaka sy hanitatra Penney (2016) . Tahirin-kevitra rehetra fa ny manta dia mila ho an'ny asa ity dia azo raisina eo Wikipedia (https://dumps.wikimedia.org/other/pagecounts-raw/). Na dia afaka mahazo izany avy amin'ny R entana wikipediatrend (Meissner and Team 2016) . Rehefa manoratra-maso ny valiny, mariho tsara izay loharano anareo tahirin-kevitra nampiasaina. (Fanamarihana: Ity asa ihany koa hita ao Chapter 6)
Vakio ny Penney (2016) ary maka tahaka Sary 2 izay mampiseho ny pejy hevitra ny "fampihorohoroana" -related pejy taloha sy taorian'ny fanambarana ny Snowden. Mahalaza ny Hevitry ny hita.
Manaraka, maka tahaka Fig 4a, izay mampitaha ny fianarana vondrona ( "Fampihorohoroana" -related lahatsoratra) miaraka amin'ny vondrona comparator mampiasa teny fanalahidy sokajy ambany "DHS & hafa Agencies" avy amin'ny DHS lisitra (jereo takila fanampiny Table 10). Mahalaza ny Hevitry ny hita.
Anisan'ny b) nampitaha ny fianarana ianao vondrona iray comparator vondrona. Penney koa oharina amin'ny vondrona roa comparator hafa: "Fotodrafitrasa Security" -related Articles (Fanazavana Fanampiny Table 11) ary malaza Wikipedia pejy (Fanazavana Fanampiny Table 12). Miakara miaraka amin'ny vondrona comparator hafa, ka hizaha toetra raha ny hita amin'ny tapany b) dia mora ny safidy ny comparator vondrona. Iza safidy ny comparator vondrona manao tena dikany? Nahoana?
Nilaza ny mpanoratra fa ny teny fanalahidy mifandraika amin'ny "fampihorohoroana" no nampiasaina mba mifidy ny Wikipedia lahatsoratra satria ny governemanta Amerikana voalaza fampihorohoroana ho toy ny fototra fanamarinana ho an'ny fanaraha-maso ny aterineto fanao. Amin'ny maha-maso ireo 48 "Fampihorohoroana" -related teny fanalahidy, Penney (2016) koa dia nitarika ny fanadihadiana tao amin'ny MTurk mangataka namaly ny fanasokajiana ny teny fanalahidy tsirairay eo amin'ny ny Governemanta manahirana, Privacy-mora mahatsapa, sy ny fisorohana (Tovana Table 7 sy 8). Maka tahaka ny fanadihadiana amin'ny MTurk ary ampitahao ny vokatra.
Miorina amin'ny ny vokatra amin'ny ampahany d) sy ny famakiana ny lahatsoratra, moa ve ianao miombon-kevitra amin'ny mpanoratra ny safidy ny lohahevitra tenifototra ao amin'ny vondrona fianarana? Nahoana na nahoana no tsy? Raha tsy izany, inona no soso-kevitra fa tsy?
[ ] Efrati (2016) tatitra, mifototra amin'ny fanazavana tsiambaratelo, fa "tanteraka fizarana" ao amin'ny Facebook efa nihena ny 5,5% isan-taona raha ny "tany am-boalohany fandaharana fizarana" dia nidina 21% isan-taona ny taona. Zavatra tsy fihenan'ny Matsilo dia indrindra amin'ny mpampiasa Facebook latsaky ny 30 taona. Ny tatitra lazaina ny fitotonganan'ny ny antony roa. Ny iray dia ny fitomboan'ny ao ny isan'ny "namana" ny olona eo amin'ny Facebook. Ny hafa dia ny fizarana misy ny asa dia nafindra ny hafatra sy ny mpifaninana toy ny SnapChat. Ny tatitra koa dia nanambara ny tetika maro Facebook efa niezaka ny hampitombo ny fizarana, anisan'izany News Feed algorithm tweaks izay manao am-boalohany Lahatsoratra kokoa ambony, ary koa ny periodical fampahatsiahivana ny mpampiasa lahatsoratra am-boalohany "amin'izany andro izany" Taona maro lasa izay. Inona no fiantraikany, raha misy, no hitan'ny ireo manana ny mpikaroka izay atao ny mampiasa Facebook ho toy ny angon-drakitra loharanom?
[ ] Tumasjan et al. (2010) nilaza fa ohatry ny bitsika misy io antoko politika mifanaraka ny ohatry ny vato izay antoko nandray tao amin'ny alemà fifidianana parlemantera tamin'ny 2009 (Sary 2.9). Amin'ny teny hafa, dia niseho fa afaka mampiasa ny Twitter mba mialoha ny fifidianana. Tamin'ny fotoana fianarana ity dia navoaka izany noheverina tena mampientam-po satria toa ny soso-kevitra sarobidy pampiasana ho an'ny iraisana loharanom-tahirin-kevitra lehibe.
Noho ny ratsy mampiavaka ny tahirin-kevitra lehibe, na izany aza, dia tokony ho resy lahatra avy hatrany ny vokany io. Alemà tao amin'ny Twitter tamin'ny 2009 dia be ny tsy solontenan'ny vondrona, sy ny mpanohana ny antoko iray mety bitsika momba ny politika matetika kokoa. Araka izany, dia toa mahagaga fa ny azo atao rehetra mifanavakavaka izay azonao an-tsaina fa somary hanafoana ny avy. Raha ny marina, ny vokatry Tumasjan et al. (2010) nivadika ho tsara loatra ho marina. Ao ny taratasy, Tumasjan et al. (2010) heverina enina antoko politika: Christian Demokraty (CDU), Christian sosialy Demokraty (CSU), SPD, liberaly (FDP), amin'ny ankavia (Die Linke), ary ny Antoko Maitso (Grüne). Na izany aza, ny tena antoko politika alemà voaresaka ao amin'ny Twitter tamin'izany andro izany dia ny Pirate Party (Piraten), ny antoko izay miady governemanta fitsipika ao amin'ny Internet. Rehefa ny Pirate Party dia tafiditra tao amin'ny fanadihadiana, Twitter milaza lasa mahatsiravina predictor ny voka-pifidianana (Sary 2.9) (Jungherr, Jürgens, and Schoen 2012) .
Figure 2.9: Twitter miresaka toa mialoha ny vokatry ny 2009 alemà fifidianana (Tumasjan et al. 2010) , fa vokatry ny fandehany ity mba miankina amin'ny sasany jadona ary tsy rariny safidy (Jungherr, Jürgens, and Schoen 2012) .
Taty aoriana, ireo mpikaroka maneran-tany no nampiasa fancier fomba-toy ny fampiasana fihetseham-po fanadihadiana ny manavaka ny tsara sy ny ratsy dia milaza ny antoko-in mba hanatsarana ny fahaizany ny Twitter tahirin-kevitra mba mialoha isan-karazany isan-karazany ny fifidianana (Gayo-Avello 2013; Jungherr 2015, Ch. 7.) . Toy izao ny fomba Huberty (2015) namintina ny vokatry ny andrana ireo mba mialoha ny fifidianana:
"Rehetra fantatra forecasting fomba mifototra amin'ny haino aman-jery sosialy ho resy rehefa nanaiky ny fangatahana ny tena handroso tarehy forecasting fifidianana. Ireo tsy fahombiazana miseho ho noho ny fototry ny toetra mampiavaka ny haino aman-jery sosialy, fa tsy ny methodological na algorithmic zava-tsarotra. Raha fintinina, haino aman-jery ara-tsosialy tsy, ary mety tsy hisy, hanatitra-tranon'omby, manavakavaka, solontenan'ny sary ny mpifidy; ary tsy hanahirana santionany ny haino aman-jery sosialy tsy ampy angon-drakitra mba hamaha ireo olana mamoaka hoc. "
Vakio ny fikarohana sasany izay mitondra Huberty (2015) izany fanatsoahan-kevitra, ary manorata pejy iray fanamarihana ny kandidà ara-politika sy ny fomba mamaritra raha toa ka tokony hampiasaina Twitter mba forecast fifidianana.
[ ] Inona no maha samy hafa ny mpahay fiarahamonina ary ny mpahay tantara? Araka ny Goldthorpe (1991) , ny tena maha samy hafa ny amin'ny mpahay fiarahamonina ary ny mpahay tantara no mifehy ny fanangonana antontan'isa. Mpahay tantara dia voatery hampiasa-drehetra mifandray kosa sociologists atao koa ny mampifanaraka ny fanangonana antontan'isa ho tanjona manokana. Vakio ny Goldthorpe (1991) . Ahoana no maha samy hafa ny sosiolojia sy ny tantara mifandray amin'ny hevitra Custommades sy Readymades?
[ ] Fanorenana amin'ny fanontaniana teo aloha, Goldthorpe (1991) nisarika maro mpanakiana valinteny, anisan'izany ny iray avy any Nicky Hart (1994) izay nanohitra Goldthorpe ny fanoloran-tena ho mampifanaraka nanao angona. Mba hanazavana ny mety ho fetra ny Tailor-nanao tahirin-kevitra, Hart namaritra ny manankarena Mpiasa Tetikasa, lehibe fanadihadiana mba handrefesana ny fifandraisana eo amin'ny kilasy sosialy sy ny latsa-bato izay nitarika ny Goldthorpe sy mpiara-miasa ao amin'ny tapaky ny taona 1960. Amin'ny maha-iray mety manantena avy amin'ny manam-pahaizana, izay tarehy namorona tahirin-kevitra hita ny tahirin-kevitra, ny manankarena Mpiasa Tetikasa nanangona tahirin-kevitra izay mifanaraka mba miresaka iray nanolo-kevitra vao haingana teoria momba ny hoavy ara-tsosialy kilasy amin'ny vanim-potoana ny fari-piainana tsy mitsaha-mitombo. Nefa, Goldthorpe sy ny mpiara-miasa aminy toa "nanadino" mba hanangona vaovao momba ny fifidianana fitondran-tena ny vehivavy. Toy izao ny fomba Nicky Hart (1994) famintinana ny tantara manontolo:
". . . izany [no] sarotra ny tsy ny hevitra fa ny vehivavy no hadino satria izany 'Tailor nanao' dataset nitanana iray paradigmatic lojika izay voahilika vehivavy traikefa. Entin'ny ny ara-fahitana ny kilasy nahatsiaro tena sy ny hetsika toy ny lehilahy-draharaha. . . , Goldthorpe sy ny mpiara-miasa taminy nanorina napetraka ny empirical porofo, Izay Mpiandry ary nitaizany ny teorika vinavina tsotsotra fa tsy amin'ny fampisehoana azy ho marim-pototra ny adequacy fitsapana. "
"Ny empirical hitan'ny ny manankarena Mpiasa Tetikasa milaza amintsika bebe kokoa momba ny masculinist soatoavin'ny tapaky ny taonjato sosiolojia noho izy ireo mampahafantatra ny fizotry ny stratification, politika sy ny ara-nofo ny fiainana."
Afaka mieritreritra ohatra hafa izay Tailor-nanao fanangonana antontan'isa manana ny mifanavakavaka ny angona hetra, naorina ao? Ahoana no mampitaha ny algorithmic mampifangaro? Inona no fiantraikany mety ho izany no ho an'ny mpikaroka, rehefa tokony hampiasa Readymades ary rehefa tokony hampiasa Custommades?
[ ] Ao amin'ity toko ity, dia ampifanoherina angon-drakitra nangonina ny mpikaroka ny mpikaroka amin'ny fitantanana ny orinasa namorona rakitsoratra sy ny governemanta. Ny olona sasany miantso ireo rakitsoratra ara-panjakana "nahita angona," izay mifanohitra amin'ny "natao angona." Marina fa hita firaketana an-tsoratra ara-panjakana ny mpikaroka, fa izy ireo koa tena natao. , Ohatra, ny teknolojia maoderina orinasa mandany be dia be ny fotoana sy loharanon-karena mba hanangona sy curate ny angona. Noho izany, ireo firaketana an-tsoratra ara-panjakana dia sady hita ka natao, izany dia miankina fotsiny amin'ny fomba fijery (Sary 2.10).
Sary 2.10: Ny sary dia sady ny ganagana sy ny bitro; ny zavatra hitanao dia miankina amin'ny fomba fijery. Governemanta sy ny raharaham-barotra firaketana panjakana dia samy hita ka natao; ny zavatra hitanao dia miankina amin'ny fomba fijery. , Ohatra, ny antso angon-drakitra nangonina firaketana an-tsoratra amin'ny finday orinasa hita angona avy amin'ny fomba fijery ny mpikaroka. Nefa, ireo firaketana an-tsoratra marina ihany no natao angona fomba fijery ny olona miasa ao amin'ny departemantan'i billing ny telefaonina orinasa. Source: Wikimedia Commons
Omeo ohatra ny angona loharanon izay nahita azy io, na araka ny hita sy natao dia manampy rehefa mampiasa izany ho an'ny angon-drakitra loharanon fikarohana.
[ ] Ao amin'ny voahevitra lahatsoratra, Christian Sandvig sy Eszter Hargittai (2015) hilazana roa karazana nomerika fikarohana, izay ny nomerika rafitra no "fitaovana" na "zavatra ny fianarana." Ohatra ny voalohany karazana fianarana dia izay Bengtsson sy ny mpiara-miasa aminy (2011) nampiasa finday angona ahafahany manara-maso ny fifindra-monina taorian'ny horohoron-tany tany Haiti tamin'ny 2010. ohatra iray faharoa dia izay karazana Jensen (2007) fianarana ny fomba fampidirana ny finday manerana an'i Kerala, India fiantraikany ny fampandehanana ny tsena ho an'ny trondro. Hitako izany satria manampy manazava ny fampianarana nomerika angon-drakitra loharano samy hafa afaka tena tanjona na dia mampiasa ny mitovy karazana tahirin-kevitra loharano. Mba hanazava bebe kokoa fanavahana izany, mamaritra fanadihadiana efatra izay efa nahita: roa izay mampiasa ny rafitra an-tserasera toy ny fitaovana sy roa izay mampiasa ny rafitra an-tserasera toy ny fototry ny fianarana. Azonao atao ny mampiasa ohatra avy amin'ity toko ity, raha tianao.